စစ်ဘေးရှာင်တွေ ထုတ်တဲ့ အမှိုက်ခြင်း
24 พ.ค. 2563 - 23:30 น.
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေအတွင်း နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်အရေအတွက် ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလအထိဆိုရင် တစ်သိန်းခြောက်သောင်း ကျော်အထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ဘေးရှောင်တွေထဲ မှာ အမ်းမြို့နယ် ပဲပဒုံဒုက္ခသည် စခန်းကို ရောက်ရှိနေကြတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့လက်မှုအတတ်ပညာတွေကို အသုံးချပြီး ဝင်ငွေရှာတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ ရပ်တည်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ပဲပဒုံ ဒုက္ခသည်စန်းမှာ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၆၁ စု၊ လူဦးရေ ၃၀၅ ဦးတို့ နေထိုင်လျက်ရှိကြပြီးတော့ အဲ့ဒီလူတွေဟာ အမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဓါးလက်ရွာဟောင်းနဲ့ အနီးဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေက စစ်ဘေးရှောင်လာခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ ဒုက္ခသည်စခန်းနှစ်ရှိပြီး မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ မြို့မအားကစားကွင်းမှာတစ်နေရာနဲ့ အမ်းမြို့ကနေ ရိုးတောင်ဘက် အတက်လမ်းမှာရှိတဲ့ ပဲပဒုံကျေးရွာမှာတစ်နေရာဖြစ်ပြီးတော့ အများစုကတော့ ချင်းလူမျိုးတွေနေထိုင် နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာ အလုပ်အကိုင်မရှိကြတဲ့ အတွက်ဝင်ငွေတွေလည်းမရှိကြသလို ထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့အချိန်ကနေ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေက လာရောက်ကူညီပေးတာတွေကို မှီခိုစားသောက်နေကြရတဲ့အတွက် သူတို့အပိုဝင်ငွေတွေရရှိနိုင်ဖို့ အခုလိုမျိုး အမှိုက်ခြင်းတောင်းတွေကို ရက်လုပ်ရောင်းချနိုင်ဖို့ အတွက် စီစဉ်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ စစ်ဘေးရှောင် ကော်တီဝင် ဒေါ်ခင်သူဇာလင်းက ပြောပါတယ်။
"ဝါးတွေပေါတော့ ကျွန်မတို့က အမှိုက်ခြင်းတောင်းတွေရက်လုပ်ဖို့အတွက် စည်ပင်ဦးစီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီး လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ ခြေနင်းပါပြီးတော့ အဖုံးအပိတ်လေးနဲ့ အမှိုက်ခြင်း တောင်းပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ သူတို့က လုပ်ကြတာပါ။ ဒါကိုကျွန်မက facebook မှာ တင်လိုက်တဲ့အခါ လူသိများလာပြီးတော့ ပုံမှန်ဝင်ငွေမဟုတ်ရင်တောင် တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက် ဝင်ငွေတစ်ခုရအောင်ဆိုပြီး လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။"လို့ စခန်းကော်မတီဝင် ဒေါ်ခင်သူဇာလင်းက ပြောပါတယ်။
အမ်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အရာရှိနဲ့သွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကာ သဘောတူညီချက်ရရှိတဲ့အတွက် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိမှာ တခြားမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသက အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း မှာယူတာတွေရှိနေ တယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
အမ်းမြို့နယ်ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အလယ်ပိုင်းဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရခိုင်ရိုးမတောင်တန်းပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ကာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သစ်ဝါးနဲ့ တောထွက်ပစ္စည်းတွေပေါများတဲ့ မြို့နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ အဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေ ဝါးနဲ့ရက်လုပ်ထားတဲ့ အဖုံးအပိတ်ပါ ခြေနင်းခြင်းတောင်းတစ်လုံးကို ကျပ်ငွေ ၅ ထောင်နဲ့ ရောင်းချပေးနေရပြီး အမ်းမြို့နယ်အတွက်ကို စည်ပင်သာယာရေးဋ္ဌာနက ဝယ်ယူနေကြောင်းနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း က စစ်တွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း အဲ့ဒီခြင်းတောင်တွေကို မှာယူနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှာ သေသပ်မှုမရှိတာကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး စနစ်တကျဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားဖန်တီးရဦးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဒေါ်ခင်သူဇာလင်းက ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီခြင်းတောင်းတွေကိုရက်လုပ်ဖို့အတွက် ဝါးတွေကိုရိုးမတောင်တန်းတွေဆီ သွားရောက်ခုတ်ယူပြီးတော့ နှီးဖြာပြီးရက်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် လူတစ်ဦးအတွက် ခြင်းတောင်းတစ်လုံးရက်လုပ်ပြီးစီးဖို့ အချိန်နှစ်ရက်ခန့် ကြာမြင့်တယ်လို့ ကိုယ်တိုင်ရက်လုပ်နေတဲ့ ချင်းအမျိုးသား ဦးငမောင်က ပြောပါတယ်။
သူတို့ဟာ အဲ့ဒီအမှိုက်ခြင်းတောင်းတွေ ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလလောက်ကနေစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကို မိသားစုကျန်းမာရေးနဲ့ စားရေးသောက်ရေးတွေမှာ အသုံးပြုလို့ရနေတာကြောင့် အထောက်အကူ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"ရွာကနေပြေးလာတာ နှစ်လကျော်ပြီ။ ကျွန်တော်တို့က စခန်းမှာနေရတာဆိုတော့ ဝင်ငွေမရှိဘူး။ ပေးတာလောက်ပဲစားနေ ရတာ။ အခု ဒီအမှိုက်ခြင်းတောင်းတွေရက်လုပ်နေရတော့ ဝင်ငွေတွေရတာပေါ့။ ခြင်းတစ်လုံးကို ငါးထောင် နဲ့ရောင်းတယ်။ ဒီငွေတွေက ကျန်းမာရေး၊ စားရေးသောက်ရေးတွေမှာ အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။"လို့ ဦးငမောင်က ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီပဲပဒုံစခန်းက ဒုက္ခသည်တွဟာ အမှိုက်ခြင်းတောင်းတွေအပြင် ဖျာ၊ ပလိုင်း၊ ဖာ၊ ခမောက် စတဲ့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ ကိုလည်း ရက်လုပ်လျက်ရှိနေပြီး တွင်ကျယ်လာလို့ရှိရင် သူတို့အတွက်ဝင်ငွေတွေ ပိုမိုရရှိလာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စခန်းအတွင်းမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ လူလတ်ပိုင်း တွေကတော့ အပြင်ထွက်ပြီး ကြုံရာကျပန်းအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်တာတွေရှိနေကြပေမယ့် ဒီလုပ်ငန်းက အပြင်းထွက်အလုပ်မရှာနိုင်တော့တဲ့ အသက်ကြီးပိုင်းတွေအတွက် အိမ်မှာနေရင်း ဝင်ငွေရစေတဲ့ အလုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေက ဆိုပါတယ်။
အမှိုက်တွေကိုသိမ်းဆည်းတဲ့နေရာမှာ ပလက်စတစ်ပုံးတွေနဲ့သာ အသုံးပြုလျက်ရှိနေကြပြီး အဲ့ဒီပလက်စတစ်ပုံးတွေနေရာမှာ ဝါးခြင်းတောင်းတွေကို အစားထိုးအသုံးပြုလာနိုင်ဖို့အတွက် တခြားဒေသတွေကိုလည်း ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်ခင်သူဇာလင်းက ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီအမှိုက်ခြင်းတောင်းတွေကို တချို့ဒေသတွေက အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ စိတ်ဝင်စားနေကြပေမယ့်မှာယူတာမများသေးကြောင်းနဲ့ မှာယူတာတွေများလာလို့ရှိရင် တော့ လုပ်ကိုင်သူတွေလည်းများပြားလာမှာဖြစ်သလို စစ်ဘေးရှောင်တွေနေ့စဉ်ဝင်ငွေတွေလည်း ပိုမိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ စစ်ဘေးရှာင်တွေ ထုတ်တဲ့ အမှိုက်ခြင်း